ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 - RayHaber
လများ: ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Rio de စက်လုပ်သမား2လူတွေဒဏ်ရာရ, ရီယို 8 အတွက်ခရီးသည်ရထား၏တိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ စဝ် Cristovao ဘူတာရုံတစ်ဦးခရီးသည်ရထားထဲမှာကာဇန်မနေ့က, နောက်ဆုံးတိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အခြားဖို့ခရီးသည်ရထားဖြစ်ပေါ်ဟုဆိုသည်။ အဲဒီအစားတင်ပို့မတော်တဆ [ပို ... ]
Üsküdar-Cekmekoy မီးသတ်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် Metro လိုင်းမှာကျင်းပခဲ့သည်
ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မက်ထရိုရထားလမ်းလိုင်းများပုံမှန်မီးဆန့်ကျင်ထိထိရောက်ရောက််ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်နေကြခြင်းနှင့်မီးခြင်း simulation စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် M5 Üsküdar-Çekmeköyမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Umraniye, Uskudar, အစ္စတန်ဘူလ်မွေးကင်းစမီးသတ်သမားများနှင့် Metro [ပို ... ]
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးလျှောက်လွှာ Eskisehir အတွက် Continues
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်လက်မှတ်ထိုး၏မူဝါဒနှင့်အတူကွန်ကရစ်လမ်း applications များ, ကွန်ကရစ်လမ်းဆီသို့ဦးတည်İnönü-Kandilli အလုပ်ဆက်လက်။ '' ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီး '' လျှောက်လွှာရယူ Worldwide မှကြိုးပမ်းခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောရလဒ်များမှာ, အလုပ် Inonu မှာထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အတူဆက်လက်။ [ပို ... ]
155 အဆိုပါ Manisa မြူနီစီပယ်အမှတ်ဒေသခံ Manisa protocol ကိုပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားမော်တော် Carrier သမဝါယမအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကြီးကြပ်။ Manisa မြို့တော်ဝန် Cengiz Ergun သမဝါယမဥက္ကဋ္ဌအာဒိုဂန်ဟာ 1 Akatmac အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် protocol ကိုမှ [ပို ... ]
နယူးလမ်းမကြီးကနေအစ္စတန်ဘူလ်မှ Kocaeli, တူရကီ
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့သားအပေါင်းတို့မှတ်ရန်လွယ်ကူ access များအတွက်အများအပြားစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်ဖို့အသစ်ဆောက်လုပ်ထားလမ်းများတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်မပြတ်မတောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
တချို့ကပြဿနာ Marmaray စမ်းသပ်မှုများတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့
Gebze-Halkalı အဆိုပါစမ်းသပ်မှု Marmaray လိုင်းစဉ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင် drives တွေကို, ဒါမှမဟုတ်ပင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လှည်းကြောင့်တိုင်းတာခြင်းအမှားအယွင်းများရန်ပလက်ဖောင်း fit နှင့် Marmaray ကွန်ကရစ်ပေါ်မှာထိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Gebze-Halkalı အဆိုပါ Marmaray လိုင်း၏လုပျငနျးဆက်လက်နေစဉ်, မတ်လပွုစုပြိုးထောညွှန်ကြားချက်များရောက်ရှိအတူ 1 8 လအဖွင့်ပြီးစီး [ပို ... ]
orient Express ကို Kars, ဗန်ရေကန် Express ကိုဗန်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးအားရထားလည်း Kars အတွက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းyaşatırkပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုက်ခိုက်မှု၏ခြင်္သေ့ရဲ့ဝေစုကိုယူ။ သငျသညျ Tatvan Express, ဗန်, Kars အသစ်များကိုအတွက်လိုင်း၏အဆုံးချင်သောကွောငျ့ရေကန်ဗန်, အထွက်နှုန်းကမရပျနိုငျ [ပို ... ]
မီးရထား Eskisehir ၏နှလုံး
အဆိုပါ ES တီဗီ၏ဧည့်သည်များ Layout အစီအစဉ်ကိုစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (MMO) ကသမ္မတ Atila Tumxuk ထုတ်လွှင့်, TÜLOMSAŞမြန်နှုန်းမြင့်ရထားထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပါသည်, said: "ဒီပြည်နယ်မီးရထား, တူရကီ၏နှလုံးကို," ဟု၎င်းကပြောသည်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ (MMO) ကသမ္မတ Atila Tumxuk ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း [ပို ... ]
"သင့်ပါတယ် OSB ကြေငြာခြင်းသင်္ဘောကျင်းဒေသများ" ၏ Samsun TSO ကသမ္မတMurzioğl
Samsun ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးကုန်သည်ကြီးများအသင်း "ဟုအဆိုပါ Samsun sanay ၏ (TSO) ဥက္ကဋ္ဌ Salih Zeki Murzioğlကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးအရည်အချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူးသောအစီအစဉ်ပေါ်ရှိလက်ရှိသင်္ဘောကျင်းဧရိယာအတွင်းတည်ရှိပြီးပို့ကုန်များနှင့် Aksa လယ်ယာမြေရည်ညွှန်းခံရဖို့လိုခငျြ2[ပို ... ]
TCDD အရာရှိများ Adapazari Adapazari ယနေ့လာမယ့်Mithatpaşaဘူတာရုံဘူတာထဲမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လေ၏။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံထံမှအစီရင်ခံစာများအဆိုအရ (TCDD) အရာရှိများ Adapazari စာမေးပွဲအတွက်ဆွေးနွေးပွဲအဘို့အရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်၏နောက်ဆုံးရပ်နားMithatpaşaလာသောကျွန်း Express ကို, [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turan တစ်မုန်တိုင်းဗျူရိုကရေစီအတွက်မှုတ်။ တစ်ဦးကမကြာသေးမီကချပိုပြီးနာမည်တစ်ခုထိုင်ခုံကနေအထွေထွေမန်နေဂျာ5ဧရိယာ Turan ပယ်ချခဲ့သည်။ Sözcü'' အစ္စမေးလ် Sahin နေအစီရင်ခံစာအရ; တာဝန်ထဲမှာအဖွဲ့အစည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်မူတည်သည် [ပို ... ]
သငျသညျပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ချိန်နှင့် ပတ်သက်. အရာရာကိုသိလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းအတွက် istanbulkart ပြင်ဆင်ပေးခြင်းစင်တာများ ... နံနကျအခြိနျနာရီဖွင့်ထား istanbulkart စင်တာများနာရီပေါင်းများစွာညနေပိုင်းတွင်ကြောင့်ပိတ်? ဒီနေရာမှာနာရီအလုပ်လုပ်ပေးပို့ istanbulkart ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစင်တာများ 2019 ... နိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှောက်လွှာစေ istanbulkart [ပို ... ]
အထိန်းသိမ်းခံအဆိုပါ YHT Freelance အလုပ်သမားများ
အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေး92-လုပ်သားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိ Zhou ရဲ့ချုပ်နှောင်ပြီးနောက်ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်များအတွက်သူတို့ရဲ့လုပ်အားခကိုလက်ခံရရှိမ Bursa အရေးယူ။ အဆိုပါဦးပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (မြို့ပြ-စီးပွားရေး) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဓိကကန်ထရိုက်တာအဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် Bursa [ပို ... ]
Gebze - Halkalı အဆိုပါ Marmaray လိုင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ? လေ့လာမှု Gebze ရဲ့ start အချက်ပြ - Halkalı ကရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အခါလိုင်းများ၏အနာဂတ်အံ့သြနေသည်။ အောင်မြင်တဲ့နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကတည်းကလွယ်ကူစွာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းနိုင်ငံသားများ၏သန်းပေါင်းများစွာ၏ဖွင့်ပွဲ, ပြီးကတည်းက [ပို ... ]
Adana ၏နယူး Boulevard Seyhan ခရိုင်
ယာဉ်အသွားအလာ Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဘဝကူးသွားဖို့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုအဆုံးသတ်သောပေးနေတာ, စဉ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှုသမ္မတဟူစိန်ခံတွင်း5နှစ်အလယ်ပိုင်းအရှေ့အနောက်ဝင်ရိုး Seyhan ခရိုင်အတွင်းရှိသစ်တစ်ခု Avenue ကိုပေး၏။ အဆိုပါ 863 Gürselpaşaရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်တထောင်မီတာအရှည်, 30 မီတာ [ပို ... ]
RayHaber 28.02.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Susta (TÜDEMSAŞ) Hm အမျိုးအစားကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်နေသော Tiron ၀ ယ်ယူရန်အတွက် Adana CTC Control စင်တာစနစ်များနှင့် Subsistems သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအလားတူမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားသတင်းများRayHaber 09.01.2019 တင်ဒါစာစောင် 09 / 01 / 2019 အဆောင် [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အဘို့အပြီးစီးသံမဏိဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Gateway မှာပရိုတိုကောကြေညာ
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စီမံခန့်ခွဲမှု 8 ကစီစဉ်မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, Hunat ဇား။ ခုနှစ်သည်ညဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရှင်းလင်းချက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ပြားတင်ဆက်သောညဉ့်၌သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်. အရောင်းအများ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကျေးဇူးတင်သံမဏိ။ ၏မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
သင်က NLA နိုင်ငံသားရဲ့မျက်လုံးနှင့်အတူပြန်နေဖို့မနိုင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှကြီးကြပ်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏နိယာမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (NLA ငါ) ၏ညွှန်ကြားမှု, 2012 /7အတွင်း 24 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော။ ငါ၏အသစ်ကိုအစားထိုး NLA 2019 နှစ်ပေါင်းရဲ့အစမှာပင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်အတူ [ပို ... ]
ဧပြီလ7အခမဲ့ခြင်းဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကားပါကင်!
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်ယာဉ်ရပ်နားဧပြီလသည်အထိအခမဲ့ 29 တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးသည်အဘယ်မှာရှိအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မှာပထမဦးဆုံးစီစဉ်ပျံသန်း၏နေ့စွဲကနေအောက်တိုဘာလ 20187အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ 31 2018 အောက်တိုဘာလများတွင်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့စီစဉ်ထားပျံသန်းမှုစတင် [ပို ... ]
အဆိုပါလှည်း Malatya အတွက်ကုန်တင်ရထားကနေကွဲကွာကြသည်, သူကအခြားကုန်တင်မီးရထားမှကူး
Malatya အတွက် 1 Müsellesဘူတာရုံ။ Sivas ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15 ကီလိုမီတာလမျးညှနျခတိုးတက်ပြီးနောက်, ဘိလပ်မြေ Sg နှစ်ခုတပ်ပြီးလှည်းအမျိုးအစား maneuvering တစ်ဦးကုန်တင်ရထားလမ်းထဲကခြားနားခြင်းနှင့်အခြားကုန်တင်မီးရထားသို့ပျက်ကျသွားသည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးများအတွက် Malatya-Sivas, [ပို ... ]